ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဘရာဇီးဘောလုံးကစားသမားများ Gabriel Martinelli ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်နှင့်အတူလူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်Nelli“ ကျွန်ုပ်တို့၏ Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင် Plus ၏မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများသည်သင့်ကလေးဘ ၀ မှယနေ့အထိထင်ရှားသောအဖြစ်အပျက်များကိုမှတ်တမ်းတင်စေသည်။
ဂါဗြေလ Martinelli ၏ဘဝနှင့်ထ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လက်နက်တိုက်, FootballLondon နှင့် TheSun
ဟုတ်တယ်၊ သူဟာမကြာသေးမီကဘရာဇီးလ်ကနေထွက်ခွာဖို့အမြန်ဆုံးတက်နေတဲ့လူငယ်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ သို့သော်အနည်းငယ်သာဂါဘရီရယ်လ်မာတင်တင်လီ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင်၊ အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
သူ၏နာမည်အပြည့်အစုံမှာ Gabriel Teodoro Martinelli Silva ဖြစ်သည်။ Gabriel Martinelli ကိုမကြာခဏခေါ်ဝေါ်ကြသောဇွန် 18 တွင်ဇွန်လ 2001 နေ့၌သူ၏မိခင်၊ ဆေးလ်ဗားအမည်နှင့်ဖခင်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ Joao Martinelli Guarulhos, São Paulo, Brazil ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ Gabriel Martinelli ၏မိဘများ၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပြီးစာရေးသားချိန်တွင်သူတို့၏ 50 အလယ်ပိုင်းတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။
Gabriel Martinelli Parents.- နှင့် Mrs နှင့်တွေ့ဆုံပါ Joao Martinelli ။ IG မှဂုဏ်ပြု
Gabriel Martinelli သည်သူ့မိသားစုမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘရာဇီးလ်စည်ပင်သာယာနှင့်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ Sao Paulo တွင်ဒုတိယလူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ မင်းသိလား?… သူ့ဖခင် Joao Martinelli မှတစ်ဆင့်သူ၏မိသားစုသည်အီတလီမှဆင်းသက်လာသည်။
ဘရာဇီးမှဘောလုံးကြယ်ပွင့်များစွာသည်ဘ ၀ ၏ဘ ၀ များကိုဘယ်သောအခါမျှမနေထိုင်ခဲ့ကြပါ။ ရုံအချို့သောဘောလုံးသမားများ (ကဲ့သို့သော ရောဘတ်ဖာမီနို နှင့် ဂါဗြေလညျယရှေုသူသည်သူ၏နာမကိုမှန်ကန်စွာအသံထွက်မကြေငြာမီလမ်းမများပေါ်တွင်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုများကိုစတင်ခဲ့သည်။ Gabriel Martinelli ၏မိသားစုသည်နေထိုင်ခဲ့သည် Guarulhos ရဲ့အဆင်းရဲဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဘောလုံး။ ဂါဘရီရယ်လ်မာတင်တင်လီသည်ကလေးဘဝကတည်းကဘောလုံးကစားခဲ့သည်။
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင်၊ ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
Gabriel Martinelli သည်ငယ်စဉ်ကလေ့လာမှုကိုစိတ်မဝင်စား ခဲ့၍ ဘောလုံးကစားခြင်းကိုသာနှစ်သက်ခဲ့သည်။ ဘောလုံးအားကစားအတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်အလွန်ကြီးမားသည်ကိုအနည်းငယ်သာထိပ်ဆုံးသို့ရောက်သွားသည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဂါဗြေလ Martinelli ၏မိဘများသည်သူတို့၏သားကိုအိမ်တွင်ကျူရှင်မှတဆင့်တရားဝင်ပညာသင်ကြားခွင့်ရရန်ရွေးချယ်ခဲ့ရသည်
Gabriel Martinelli ၏ပညာရေးသည် Futsal မှစတင်ခဲ့သည်။ ကြိုက်တယ် Philippe Coutinho သူ၏ရှေ့မှောက်၌ Martinelli ၏အနီးကပ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လျင်မြန်သောခြေထောက်များကိုဘောလုံးကစားခြင်းမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကဒေသခံလယ်ကွင်း Guarulhos ညနေခင်းတွင်ဘောလုံးကစားရန်စုရုံးနေသောလူငယ်များအတွက်အရည်ပျော်သည့်အိုးဖြစ်သည်။
Gabriel Martinelli အတွက်ဘောလုံးစတင်ခဲ့သည့် Guarulhos ၏ဒေသအလိုက်လယ်ကွင်း။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် TheSun
Gabriel Martinelli သည်သူ၏မိဘများကိုကောင်းချီးပေးခဲ့သည် အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏သံသယများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်၊ သူ၌အရည်အချင်းရှိကြောင်းနှင့်ဘောလုံးကွင်းထဲမှတစ်ခုခုပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသိရှိခဲ့သည်။ လူငယ်တိုက်လေယာဉ်အနေဖြင့်မာတင်တီလီသည် Futsal ၏ကုန်သွယ်မှုသည်ခက်ခဲပြီး၊
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင်၊ အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
အသက် ၉ နှစ်အရွယ်မှစပြီးဒီလူငယ်လေးကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ် ကောရိန္သုအသင်း၏ဖူဆယ်အသင်း အဘယ်သူသည်စမ်းသပ်မှုများအတွက်သူ့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ Martinelli ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းသူ့နည်းပြ၏နှလုံးသားကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Martinelli သည်ကောရိန္သုအသင်း၏ Futsal အသင်းနှင့်ကစားရန်မြန်ဆန်ခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… သူသည် Metropolitan ချန်ပီယံရှစ်အထူးဌာန၌ 66 ဂိုးများနှင့်အခြားရွှေစီးရီးတွင် 56 ဂိုးများသွင်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင်ဂိုးများရရှိခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း 122 ။
Futsal နှင့်အတူ Gabriel Martinelli အစောပိုင်းဘဝ။ 142 ဂိုးများနှင့်ဂိမ်းကိုချန်ထား။ Credit: TowerHamlets
2012 မှဘောလုံးမှာဘောလုံးကစားခြင်းနှင့်ဖူဆယ်လ်ကိုမကစားခြင်းသည်သူ၏ ဦး စားပေးဖြစ်လာခဲ့သည်။ Futsal ကိုဘောလုံးကွင်းတွင်ဘောလုံးမကစားမှီ Martinelli သည် 20 ထပ်မံဂိုးများဖြင့် 142 ဂိုးများသွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ဘောလုံးကွင်းတွင်ဘောလုံးနှင့်အတူမာတင်နယ်လီသည် 63 ဂိုးများသွင်းယူပေးခဲ့သည်။ အတွက် 202 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိသည့်အချိန်တွင် ကောရိန္သု, သူကထို့နောက်ကင်းထောက်ခဲ့သည်နှင့်ထို့နောက်အပေါ်သို့ခေါ်ခဲ့သည် 2015 တွင်ဘရာဇီးစတုတ္ထဌာနခွဲ Ituano FC သည်
Ituano FC ၌ရှိစဉ် Gabriel Martinelli သည်သူ၏နည်းပြနှင့်ပရိသတ်များကိုဆက်လက်စွဲမှတ်စေခဲ့သည်။ မင်းသိလား?..။ သူသည်ကောင်းမွန်သောကြောင့် Ituano အတွက်အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ပရိသတ်များကသူသည်တီထွင်မှုတွင်ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်ကြောင်းအမှန်တကယ်သိခဲ့ရသည်။
Gabriel Martinelli ၏အစောပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု။ Image Credit: FootballLondon
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင်၊ Fame ပုံပြင်မှလမ်း
ပွဲ ဦး ထွက်ကတည်းက Martinelli သည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ဂတိပြုမှုများစွာကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဥရောပ၏ကုမ္ပဏီကြီးများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည် (Man Utd, Barcelona, ​​Real Madrid). မင်းသိလား? ဥရောပကုမ္ပဏီကြီးတွေထဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာသူ့ကိုပထမအကြိမ်စမ်းသပ်မှုပြုပြီးသူ့ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်စဉ်ဂါဗြေလ Martinelli သည်လူငယ်နှင့်အတူတူပင်ကစားခဲ့သည် Mason Greenwood ။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုလေးစားဖွယ်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်းငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ မန်ချက်စတာမှမထွက်ခွာမီပိုမိုစိမ်းလန်းသောကျက်စားရာနေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်၊ ရှင်ပေါလု Pogba ပယ်ချဘရာဇီးတွေ့ဆုံခဲ့သည် Martinelli ၏စကား၌၎င်း,
“ ကျွန်တော့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကြောင့် Pogba ကကျွန်တော်ဟာဘရာဇီးလူမျိုးပါ။ ငါနဲ့အရာအားလုံးငါနဲ့အဆင်ပြေလား၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုသူ့အားပြောပြခဲ့ပြီးသူကသူနှင့်ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သူကငါ့အချိန်မှာငါ့ကိုစောင့်ရှောက် "
ယူနိုက်တက်နှင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်ဂယ်ဗယ်လ်မာတင်လင်းလီအားပေါလ်ပိုဂဘားကစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ အကြွေး: TheSun
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်မအောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်ဘာစီလိုနာသည်ဂါဘရီရယ်လ်မာတင်တီလီအားအခြားနာမည်ကြီး La Masia အကယ်ဒမီတွင်လေ့ကျင့်ခွင့်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
“ La Masia နဲ့ကျွန်တော့်လေ့ကျင့်မှုဟာဘောလုံးမှာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်လေ့ကျင့်မှုအဆင့်မှာအလွန်မြင့်မားပြီးဘောလုံးအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာတိုးတက်စေခဲ့သည်။"Martinelli တစ်ချိန်ကကဆိုသည်။
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင်၊ Fame ပုံပြင်မှထလော့
မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုလေးစားရန်နှင့်နာမည်ကြီးစေရန် Gabriel Martinelli သည် Ituano FC နှင့်အတူဘရာဇီးကိုပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူသည်နာမည်ကျော်ဆော်ပိုလိုပြည်နယ်ချန်ပီယံရှစ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်ရွေးချယ်ခံရသောအခါသူကိုယ်တိုင်နာမည်ရရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။
မင်းသိလား?… Gabriel Martinelli သည်စည်ပင်ထွန်းကားလာသည်။ သူဟာ Ituano FC ကိုအုပ်စုအဆင့်တွေအနိုင်ရအောင်ကူညီနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်များကြောင့်အားလုံးလေးပုံတစ်ပုံကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သည်။
ဂါဗြေလမာတင်လင်းလီသည် Fame to Rise - ဤတွင်သူသည် Sao Paulo ပြိုင်ပွဲ၌ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်ပွဲခံသည်။ FootballLondon ကိုဂုဏ်တင်
Gabriel Martinelli ၏ဖျော်ဖြေမှုသည်မေလ 2019 ရှိဘရာဇီးအမျိုးသားအသင်း၏မတိုင်မီ Copa Américaလေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွင်သူ့ကိုအမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ?။ ဆိုလိုတာကသူဟာဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ဖို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ် နေမာ, Coutinho နှင့်ကျန်ဘရာဇီးအကြီးတန်းကစားသမား။
Paulista AKA Paulistãoတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ဘရာဇီးနိုင်ငံSão Paulo ရှိထိပ်တန်းလေယာဉ်ကွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးအသင်း) သည်သူ၏ငယ်ရွယ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်နောက်ထပ်အလှည့်အပြောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… ပြိုင်ပွဲကိုကစားပြီးနောက် Gabriel Martinelli သည်3၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်Paulistãoလိဂ်ဆုများကိုဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ (Campeonato Paulista အကောင်းဆုံးမျက်နှာသစ်၊ တစ်နှစ်တာကျေးလက်ဒေသကစားသမားနှင့်တစ်နှစ်တာအသင်းသို့မဟုတ် 2019).
Gabriel Martinelli ၏ကျော်ကြားမှုဇာတ်လမ်း - Paulista 2019 Games Award ။ Twitter ကိုဂုဏ်တင်ပါတယ်
Martinelli သည်ငယ်ရွယ်သော်လည်းသူ၏ဇာတိမြေတွင်နာမည်ကြီးခဲ့သည်။ ဆုများရရှိပြီးသည့်နောက်သူသည်သူ၏လက်မှတ်ထိုးရန်တောင်းခံလာကြသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ 25 ထိပ်တန်းကလပ်များထက်နည်းနည်းမျှစိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းကိုထွက်ခွာစဉ်မှာဒီလူငယ်ကစားသမားသည်သူ၏သူရဲကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သည်။
"ကျွန်တော့်ကိုအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့လက်ခံခဲ့တယ် ငယ်ငယ်တုန်းကရှက်တတ်လာတယ်။ ငါရုပ်မြင်သံကြားနှင့် PlayStation တွင်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းသာသူကစားသမားကိုမြင်တော်မူ၏။ သူတို့အားလုံးကကျွန်မကိုအရမ်းကြိုဆိုကြပြီးအိမ်မှာနေစေတယ်သူကအာဆင်နယ်အသင်းကိုရောက်လာပြီးနောက်
Gabriel Martinelli သည် Nottingham Forest ကိုဆန့်ကျင်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်နှစ်ဆတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏အစွမ်းအစကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပထမဆုံးခြေလှမ်းများလှမ်းခဲ့သည်။ Carabao Cup သူရဲကောင်းများအပြီးတွင်သူသည် Europa League ရှိ Standard Liege ၏ 4-0 လမ်းကြောင်းတွင်နှစ်ကြိမ်သွင်းယူခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုအထောက်အထားများ (AFCVN Official Credit) ။
အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်သူ၏နုပျိုသောနှစ်များရှိသော်ငြားလည်းသူ၌ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုရှိသည်။ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေဟာကမ္ဘာ့အဆင့်မီအရည်အချင်းရှိကစားသမားတစ် ဦး ကိုမျက်လုံးရှေ့မှောက်မှာအပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်နေရမယ့်အနေအထားရှိနေမှာသေချာပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာ, ငါတို့ပြောလိမ့်မယ်, ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင်၊ relationship ဘဝ
သူ၏ကျော်ကြားမှုနှင့်လန်ဒန်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူအာဆင်နယ်နှင့်ဘရာဇီးပရိသတ်များက Gabriel Martinelli တွင်ရည်းစားရှိသလားဟုတွေးမိဖွယ်ရှိသည်။ အမှန်တရားကတော့; သူပြီးသားဖြစ်သည် နှင့်အောင်မြင်သောဘောလုံးသမားနောက်ကွယ်မှ, အမည်အားဖြင့်သွားသူတစ် ဦး လှပသောမိန်းကလေးရှိပါတယ် ရာခေလ Akemy.
Gabriel Martinelli ၏ရည်းစားဟောင်း - ရာခေလ Akemy နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ IG မှဂုဏ်ပြု
အာဆင်နယ်အသင်းသို့တလခန့်အကြာတွင် Gabriel Martinelli သည်ရည်းစားဟောင်းနှင့်လက်ထပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားခြင်းဖြင့်ရဲရင့်သောခြေလှမ်းများလှမ်းခဲ့သည်။ ဤသည်ကသူ၏ရုပ်တုအားဖြင့်ယူအလားတူချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည် Philippe Coutinho သူဟာငယ်ငယ်လေးကတည်းကရည်းစားနဲ့စေ့စပ်ပြီးလက်ထပ်ခဲ့တယ်။
Rachel Akemy နှင့် Gabriel Martinelli တို့သည်ထူးခြားဆန်းပြားသောနေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်စဉ်သူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အခွင့်အရေးမပျက်ကွက်ခဲ့ကြပါ။ London Tower Bridge သည် Bridge ဖြစ်သည်သူတို့ရဲ့အပန်းဖြေအချိန်ကာလအတွင်းစုံတွဲရဲ့အကြိုက်ဆုံးထွက်ပြေးဖို့ ne ။
လန်ဒန်၏ Tower Bridge တွင် Gabriel Martinelli နှင့် Girlfriend IG မှဂုဏ်ပြု
နှစ် ဦး စလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူသွားကြသည်ကိုလမ်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်, ကအိမ်ထောင်ရေးဟောင်းခြေလှမ်းအဘို့အနောက်တစ်နေ့ဖြစ်နိုင်သည်ပုံရသည်။
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Gabriel Martinelli ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုသိကျွမ်းခြင်းကသူ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။
Gabriel Martinelli ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝအချက်အလက်။ Instagram ကိုချီးမြှင့်သည်
Gabriel Martinelli သည်စတင်ထွက်ခွာချိန်တွင်တိုက်လေယာဉ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအသွင်အပြင်ရှိသော်ငြားစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးပြတ်ပြတ်သားသားနေထိုင်သောသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အသွင်အပြင်များနှင့် ပတ်သက်၍ မာတင်တင်လီသည်သူ၏သတ္တိနှင့်ဘဝကိုသူ့အားယူဆောင်လာသည့်အရာနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုတို့ကြောင့်သူသည်အားလုံးထက်အသက်ကြီးသည်။
သူရေးသားခဲ့သောအချိန်တွင် 18 ဖြစ်သည့် Martinelli သည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝကိုအလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်သည်။ သူသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကအခြားလူငယ်ကစားသမားများထံမှရပ်စဲသွားသဖြင့်သူ့ရည်းစားနှင့်လူသိရှင်ကြားဖြစ်ရန်ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါ။ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်ရဲရင့်ခြင်း၏လက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင်၊ မိသားစုဘဝ
Martinelli သည်သူ၏မိသားစုကို ၀ င်ငွေကောင်းသူဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဖြင့်သူ၏မိသားစုသည်ဘဏ္independenceာရေးလွတ်လပ်မှုဆီသို့ ဦး တည်သည့်လမ်းကိုဘောလုံးမှတစ်ဆင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဘောလုံးတွင်သူလုပ်သောအောင်မြင်သောမိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ရှိခြင်းသည်သူ့အိမ်သူအိမ်သားအားလုံးကိုပိုမိုနီးကပ်စေပြီးဘောလုံးပွဲနှင့်တွဲဖက်စေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင်သူ၏အစ်ကိုများ၊ ဆွေမျိုးများ၊ အစ်မ ဦး လေးများနှင့်အဒေါ်များအပါအ ၀ င်မိသားစုသည်သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးအာဆင်နယ်အသွင်အပြင်၌ဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်သူတို့၏သေးငယ်သောတိုက်ခန်းတွင်ကျင်းပကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် TheSun.
Gabriel Martinelli ၏ဖခင်အကြောင်း Joao Martinelli သည်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး Martinelli Grandparents ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်သူ၏သား Gabriel Martinelli ကိုအီတလီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူခြင်းနှင့်အီတလီအမျိုးသားအသင်းနှင့်အတူအနာဂတ်ရှိခြင်းနေရာရရှိရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖခင်နှင့်သားအကြားသိသာထင်ရှားသည့်ဆင်တူချက်ရှိသည်။
Gabriel Martinelli ၏ဖခင်နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Instagram ကိုချီးမြှင့်သည်
Gabriel Martinelli ၏မိခင်အကြောင်း အနည်းငယ်သာသူမ၏အကြောင်းကိုလူသိများသည်။ သို့သော်သူမခင်ပွန်း Joao နှင့်လက်မထပ်မီသူမသည် Silva ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ အထက်ပါဗီဒီယိုမှကြည့်လျှင် Gabriel Martinelli ၏မိခင်သည်စာရေးချိန်တွင်ဘရာဇီးတွင်ကျန်ရှိနေသေးသောကျန်မိသားစုများနှင့်အတူနေဆဲဖြစ်သည်။
Gabriel Martinelli ၏မိခင်နှင့်တွေ့ဆုံပါ Instagram ကိုချီးမြှင့်သည်
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင်၊ လူနေမှုပုံစံ
သူ၏ကြီးပြင်းမှုကြောင့် Gabriel Martinelli သည်သူ၏ဘဏ္ancesာရေးကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းရန်ခိုင်မာသည့်အခြေအမြစ်ရှိသည်။ စာရေးသားချိန်၌ကဲ့သို့ပင် Martinelli သည်စျေးကြီးသောကားများနှင့်အိမ်များအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်သည့်ထင်ရှားကျော်ကြားသည့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုမတွေ့ရပါ။
Gabriel Martinelli လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်များ။ GlobeFreak နှင့် Instagram ကိုချီးမြှောက်ပါ
Gabriel Martinelli ကလေးဘဝပုံပြင်၊ မရေမတွက်အချက်အလက်
ဘာသာတရား: ဂါဘရီရယ်လ်မာတင်တင်တီသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီးသူ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘ ၀ တွင်ရိုမာကက်သလစ်ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကျင်းပစဉ်ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းမှသူဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိပါ။
911 တိုက်ခိုက်မှုများသည်သူမွေးဖွားသောနှစ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… 3% သာအင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်ဝဘ်မှ9/ 11 တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလတွင်အတိအကျ 11 2001 အားပြန်ပေးဆွဲထားသောအမေရိကန်လေယာဉ်နှစ်စင်းသည်နယူးယောက်ရှိကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာ၏အမြွှာမျှော်စင်များသို့ထိုးထွင်း။ အဆက်မပြတ်ပြိုလဲခဲ့သည်။
သူမွေးဖွားသည့်နှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်၏လမ်းကြောင်းအပေါ် ဘေးဥပဒ်ကို, ဇန်နဝါရီလ 7.9 တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ဂူဂျာရတ်ငလျင်သည် 26 ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာဖြင့်တိုင်းတာသောငလျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး 20,000 လူများကိုသေစေပြီး 167,000 ကိုထိခိုက်စေခဲ့သည်။
သူမွေးဖွားသည့်နှစ်တွင်အရေးကြီးသောနည်းပညာများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 13, 2001, Wikipedia.org အွန်လိုင်းလာသည်။ ဇူလိုင်လ 2001 တွင်ဂူးဂဲလ်သည်သုံးစွဲသူများအား 250 ပုံရိပ်သန်းပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုရန်လူကြိုက်များသော“ Image Search” ကိုစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး၊ နိုဝင်ဘာ 15 တွင်၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ် Xbox ဗီဒီယိုဂိမ်းစက် console ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ Gabriel Martinelli ကလေးဘဝအကြောင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Philippe Coutinho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Daniely Alves ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နေမာကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဂါဗြေလညျယရှေုကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်